Gudoomiyihii Gobolka Sool Saalax Askar Faarax oo dhaawac halis ah ku noqday qaraxii Laascaanood iyo magaalada oo ku jirta xaalad kacsan. | Halganka Online
Gudoomiyihii Gobolka Sool Saalax Askar Faarax oo dhaawac halis ah ku noqday qaraxii Laascaanood iyo magaalada oo ku jirta xaalad kacsan.
Posted on Janaayo 28, 2010 by halganka
Warar dheeraad ah oo kasoo baxay qaraxii ka dhacay magaalada Laascaanood ee Xarunta Gobolka Sool ayaa sheegaya in gudoomiyihii gobolkaasi ugu qaabilsanaa maamulka Woqooyi Saalax Askar Faarax uu dhaawac halis ah ku noqday weerarkaasi.
Warar madax banaan ayaa sheegaya in dhaawaca gudoomiyaha uu ka gaaray qeybaha hoose ee jirka iyadoona si xun lugaha uu kaga bur buray sida aan kasoo xiganay ilo wareed lagu kalsoon yahay oo ku sugan gudaha magaalada Laas Caanood kaasi oo kuu daray in qaraxa sidoo kale ay dhaawacyo kasoo gaareen 3 nin oo la socotay Saalax Askar markii qaraxu haleelay.
Ciidamo fara badan oo goobtaasi yimid kadib qaraxa ayaa iyana la sheegaya dhaawacyo in ay ka dhasheen rasaas ay fureen si dhaawaca Gudoomiyaha ay u badbaadiyaan iyagoona ula cararay Cusbitaalka magaaladaasi.
Masuulkaasi qaraxa maanta lagu beegsaday ee haddana dhaawaca ah ayaa kamid ahaa shaqisyaadki sida adag wadaaadada ugula dagaalamay gobolka Sool isagoona hogaan u ahaa koox Jawaasiis ah oo ku xiran Tigreega intii aaney maamulka Woqooyi la wareegin gobolkaasi oo laga dhigi gudoomiyaha Gobolka, waxaana dadkii yaqaanay ku tilmaameen in uu ahaa ninkii ugu darnaa dabagalka wadaado diimeedyada lagu xiriiriyo ku lug lahaanshiyaha dagaallada Koofurta ka socda.
Xaaladda magaalada Laascaanood ayaa wali aad u kacsan iyadona la sheegayo maleeshiyaad careysan oo kamid ah maamulkaasi in ay guryo galeen dadka qaarkoodna ay waddooyinka ka kaxeysteen iyagoo ku xiriirinaya weerarkii qaraxa.
Dhawaan ayaa magaalada Laascaanood looga takahulsay qaraxyo kan lamid ah saraakil sar sare oo kamid aheyd maamulkaasi, waxaana laga baqayaa in xaaladahan soo kordhay oo hadda si xoogan kaga taagan deegaanka Gobollada Bari in ay ku baahaan gobollada Woqooyi ee maamulka iyana ka jira uu gacansaar dhaw la leeyahay Tigreega si lamid ah maamulka Bari.
« Diyaaradaha dagaalka Mareykanka oo xalay guuxooda lagala hurdi waayay gobollada Galgaguud iyo Hiiraan. Cali Dhallaaye oo iska casilay xilkii Madaxa Sirdoonka gobolka Sool, dalbadayna in shacabnimo lagu qadariyo oo aan la dhibaateyn. »